Soo galitaanka xubinta
Cusboonaysiinta iyo falanqaynta xaalada, oo ay weheliso Talaabo Qaado iyo Wararka Fiidiyowga ee ugu dambeeyay, Wararka Warbaahinta, Khariidadaha iyo qiimaynta ForRB iyo xuquuqul insaanka.
Akhri wararka, digniinaha, iyo warbixinada ka soo baxay Komishanka Maraykanka ee Xoriyadda Diimaha Caalamiga ah (USCIRF).
WARBIXIN: WARKA UN FORB
Ka raadi shabakada Qaramada Midoobay iyo ReliefWeb si aad u hesho wararka hadda jira iyo kuwa taariikhiga ah ee la xidhiidha ForRB iyo xuquuqul insaanka.
XAQ U LEEDAHAY
OLOLAHA SPOSTLIGHT: MYANMAR
Ku boori xubinta Congress-ka inay taageerto sharciga u baaqaya dawladda Maraykanka oo buuxda iyo jawaab caalami ah si loo sii daayo hoggaamiyeyaasha la xidhay ee Burma iyo in la taageero kooxaha diinta iyo qowmiyadaha ah ee wajaha rabshadaha socda.
Ka qayb qaado ololayaashayada ama samee kuwaaga si ay siyaasad dejiyayaasha Washington iyo adduunka oo dhan ay uga maqlaan muwaadiniinta-horyaalka xorriyadda caqiidada iyo caqiidada caalamiga ah.
Xeeladaha Ololaha & TABABBARKA
Qeybtaan waxaa ku jira qalab lagu xoojiyo saameyntaada u doodista iyo ololaha. Qalabkan kooban waxa ay muujinayaan hababka ugu fiican ee istiraatijiyadda, fariimaha, abaabulka iyo horumarinta arrimaha.
AALADAHA FICILKA INTERNETKA
Halkan waxa aad ka heli kartaa agabka iyo aaladaha aad u baahan tahay si aad uga qaybgasho ololayaasha ficilada la beegsaday.
1) Aasaaska ForRB - KhayraadkaKhayraadkani waxay ka caawin doonaan qof kasta oo danaynaya xoriyada diinta caalamiga ah inuu ogaado sababta ay muhiim ugu tahay bulshada iyo waxa ay samayn karaan si ay u ilaaliyaan xoriyada diinta iyo caqiidada dadka aduunka oo dhan.
2) Khayraadka Bulshooyinka IimaankaKhayraadkani waxa ay ka caawin doonaan hogaamiyayaasha caqiidada inay ogaadaan caqabadaha hadda jira ee ku wajahan xoriyada diimaha caalamiga ah oo ay wax ka qabtaan mawduucyadaas bulshooyinkooda.
3) Khayraadka Cilmi-baarayaasha WaxbarashadaKhayraadkani waxay ka caawin doonaan ardayda inay bartaan xoriyada diinta caalamiga ah iyo fursadaha iyo ururada ka caawin doona inay isbedel sameeyaan.
4) Khayraadka Dhaqdhaqaaqayaasha & U doodayaashaKhayraadkani waxay ka caawin doonaan dhaqdhaqaaqayaasha inay sii fahmaan oo ay u doodaan xoriyada diinta caalamiga ah ee deegaankooda, gobolka, qaranka, iyo beesha caalamka.
5) Khayraadka Hogaamiyaasha Da'da yarKhayraadkani waxay caawin doonaan hogaamiyayaasha dhalinyarada iyo inay bartaan xoriyada diimaha caalamiga ah waxayna ogaan doonaan fursadaha iyo ururada ka caawin doona inay isbedel sameeyaan.
6) Khayraadka Difaacayaasha Sharciga ahKhayraadkani waxay ku qalabayn doonaan qareennada u doodista xuquuqul insaanka ilaha cilmi-baarista sharciga ah iyo isku xirka shabakada si loo ilaaliyo xuquuqda aasaasiga ah ee dhammaan.
7) Kheyraadka loogu talagalay Dejiyayaasha SiyaasaddaKhayraadkani waxay ka caawin doonaan siyaasad-dejiyeyaasha inay dejiyaan siyaasado iyo soo-jeedinno lagu sii kordhinayo xorriyadda diimeed ee caalamiga ah.
Guji sawirka kore si aad u gasho maktabadda.
Ka raadi ama ka baadh maktabadda aqoonta nuxurka war-baahinta badan iyo agabka ay habeeyeen qaybaha iyo calaamadaha meta.
Sharciyada riddada & cayda
Xasuuqa & Ka Hortagga Arxan-darrada
Sharciga & Siyaasadda
Nidaamyada & Falanqaynta Qaranka
Cadaadiska Diinta & Cabudhinta
Dhibanayaasha & Maxaabiista
SIYAASADDA US & SHARCI
Dhibcaha Koongareeska Mareykanka
Waxay iftiiminaysaa diiwaannada codbixinta ee xubnaha Senate-ka Mareykanka iyo Aqalka Wakiilada ee sharci-sharciyeedyada, qaraarada, iyo wax ka beddelka taageeraya xorriyadda diimaha caalamiga ah...
Yaa iga wakiil ah Congress-ka?
Isticmaal ciwaanka ama dhagsi khariidada si aad u heshid Senatarkaaga iyo wakiilkaaga Mareykanka.
Dabagalka Sharci-dejinta IRF
Hawlaha sharci-dejinta ee hadda iyo taariikhiga ah --Search Congress.gov oo sahamin IRF sharciyada, dhaqdhaqaaqa, iyo jilayaasha.
Senatka Mareykanka & Aqalka IRF diiwaanada cod bixinta
1998 Xeerka IRF Dib u eegis
Dib u eegis Sanad Guurada 20aad ee IRFA
Sannad-guurada 20-aad ee dib-u-eegistii Sharciga IRF ee 1989 wuxuu dib u eegayaa dadaalladii iskaashiga ahaa ee ka caawiyay is-dhexgalka xorriyadda diimeed ee caalamiga ah gudaha siyaasadda dibadda ee Maraykanka.
Ilaha USG ForRB
Ka raadi sharciyada Dowladda Mareykanka, siyaasadaha, xeer-hoosaadka federaalka, dhacdooyinka, warbixinnada, iwm: Congress-ka, Laanta Fulinta, Maktabadda Congress-ka, CRS, sharci-dejinta gobolka, heshiisyada, iwm.
ForRB wadan ahaan
Xorriyadda diinta ee Afrika waddan ahaan
Xoriyadda diinta ee Aasiya waddan ahaan
Xorriyadda diinta ee Yurub waddan ahaan
Xoriyadda diinta ee Koonfurta Ameerika waddan ahaan
Xorriyadda diinta dal ahaan
Baadh oo baadh 197 dastuur oo qaran (kuwa qabyo ah iyo kuwa dhaqangal ah) oo is barbar dhig sida ay u ilaaliyaan ama u xaddidayaan FORB.
Akhri heshiisyada caalamiga ah iyo heshiisyada la xiriira ForRB iyo xuquuqaha kale ee aadanaha.
Qodobada Falanqaynta Dalka
Hagaha Adduunka ee dadka laga tirada badan yahay iyo dadka asaliga ah (database la raadin karo)
Dadka ku hoos jira Hanjabaadda (Khariidadda Interactive)
Wadamada USCIRF ee walaaca gaarka ah
FORB wadan (Wikipedia)
Liiska Daawashada Adduunka ee albaabbada furan (2020)
ARIMAHA MUHIIMKA AH
Xoriyadda Diinta Uyghur
Riddada & cayda
Xasuuqa & Xasuuqa
FORB SHABADAHA ROUNDtableable
Raadi xiriiriyeyaasha iyo warbixinnada miiska wareegyada ForRB ee gobollada iyo golayaasha.
Wareegga Xorriyadda Diimaha Caalamiga ah ayaa isticmaalaya Zoom si uu u martigeliyo shirar joogto ah oo la isugu yeedho. Qaybtan waxaad ku soo diri kartaa, hel Zoom, waxaad ka heli kartaa caawinta toogashada dhibta, oo waxaad ka heli kartaa qoraallo iyo waraaqo boggan.
DHACDOOYINKA ROUNDTABLE IRF (DC)
Jadwalka iyo liiska taariikhiga ah ee Dhacdooyinka soo socda ee Wareegga IRF ee DC.
Xaruntan u doodista ee onlaynka ah, oo ay ka buuxaan agab hawleed iyo macluumaad, ayaa loo isticmaali karaa difaaca iyo horumarinta xoriyada caalamiga ah ee diinta, caqiidada, iyo damiirka.
Maxaa Hada Dhacaya
OLOLAHA - TALLAABO KA QAAD
Ololaha Koongareeska Burma
LIISKA DHACDOOYINKA IRF ee soo socda
Dhacdooyinka Wareega ee IRF (DC)
Guji xiriirinta si aad u gasho ilaha la xushay
Aasaaska Xoriyadda Diinta: Khayraadkani waxay ka caawin doonaan qof kasta oo danaynaya xoriyada diinta caalamiga ah inuu ogaado sababta ay muhiim ugu tahay bulshada iyo waxa ay samayn karaan si ay u ilaaliyaan xoriyada diinta iyo caqiidada dadka aduunka oo dhan. Guji si aad u hesho sheekooyinka aduunka oo dhan, siyaabaha aad uga qayb qaadan karto, iyo isku xidhka gelida jaantusyada iyo dhacdooyinka Helitaanka ilaha
Bulshooyinka Iimaanka: Agabkani waxa uu ka caawin doonaa hogaamiyayaasha caqiidada in ay ogaadaan caqabadaha hadda jira ee ku wajahan xoriyada diimaha caalamiga ah oo ay wax ka qabtaan mawduucyadaas bulshooyinkooda. Guji si aad u hesho sheekooyinka, macluumaadka safiirrada gobollada ee sida hagar la'aanta ah uga shaqeeya horumarinta IRF, iyo adeegyada adeegyada ay hoggaamiyayaasha la wadaagaan bulshadooda. Helitaanka ilaha
Baarayaasha tacliinta: Khayraadkani waxay ka caawin doonaan ardayda inay bartaan xoriyada diimaha caalamiga ah iyo fursadaha iyo ururada ka caawin doona inay isbedel sameeyaan. Guji si aad u hesho wararka iyo macluumaadka ku saabsan IRF, fursadaha shaqo barasho, cilmi baarista tacliinta, iyo wax ka badan. Helitaanka ilaha
Dhaqdhaqaaqayaasha & U doodayaasha: Khayraadkani waxay ka caawin doonaan dhaqdhaqaaqayaasha inay sii fahmaan oo ay u doodaan xoriyada diimaha caalamiga ah ee deegaankooda, gobolka, qaranka, iyo beesha caalamka. Guji si aad u hesho macluumaadka ku saabsan arrimaha xorriyadda diinta ee hadda ka jira adduunka, agabka u doodista, xeeladaha hore, iyo siyaabaha aad u abuuri karto olole adiga kuu gaar ah si kor loogu qaado IRF. Helitaanka ilaha
Hogaamiyaasha Dhalinyarada: Khayraadkani waxay caawin doonaan hogaamiyayaasha dhalinyarada iyo inay bartaan xoriyada diimaha caalamiga ah waxayna ogaan doonaan fursadaha iyo ururada ka caawin doona inay isbedel sameeyaan. Guji si aad u hesho wararka iyo macluumaadka ku saabsan IRF, fursadaha shaqo barasho, cilmi baarista tacliinta, iyo wax ka badan. Helitaanka ilaha
Difaacayaasha Sharciga ah: Khayraadkani waxay ku qalabayn doonaan qareenada u doodista xuquuqul insaanka ilaha cilmi-baarista sharciga ah iyo isku xirka shabakada si loo ilaaliyo xuquuqda aasaasiga ah ee dhammaan. Guji si aad u gasho aaladaha cilmi-baarista ee onlaynka ah, cusboonaysiinta IRF, macluumaadka ku saabsan arrimaha taagan, iyo shabakadaha sharciga ah. Helitaanka ilaha
Siyaasad-dejiyayaal: Khayraadkani waxay ka caawin doonaan siyaasad-dejiyeyaasha inay dejiyaan siyaasado iyo soo-jeedinno lagu sii kordhinayo xorriyadda diimeed ee caalamiga ah. Guji si aad u hesho falanqaynta, cusboonaysiinta IRF, macluumaadka ku saabsan arrimaha hadda jira, iyo sida aad uga qayb qaadan karto IRF adiga oo isticmaalaya sharci iyo u doodid. Helitaanka ilaha
Wax badan ka baro arrimaha la xiriira xorriyadda diinta iyo caqiidada (FORB).
Diyaari & Tababar
Hababka ugu fiican ee u doodista iyo ololaha.
Isku diyaari waxqabad
Dhiirigeli oo u horseed isbeddel kuwa nugul iyo kuwa dulman. Abuur ama ku biir olole
Hoggaan degdeg ah
Ka Wada Shaqaynta Sharafta Dhammaan
Kaniisada Falls, VA 22046
Nagala soo xidhiidh email ahaan
Xarunta Xoriyadda ee Online
Ku deeq/ taageer Xarunta Xoriyadda
Xuquuqda daabacaadda © 2021 21Wilberforce | Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah | Shuruudaha Isticmaalka | Waxaa naqshadeeyay iCatalyst CKS